Ukuqonda iSOPA | Martech Zone
Lwesine, Disemba 8, 2011 Lwesine, Disemba 8, 2011 Douglas Karr
Ukuba uthatha ixesha lokucinga ngayo, i-Intanethi kuphela kwenxalenye yoqoqosho lwaseMelika olwenza kakuhle ngoku. Andikholelwa ukuba ikhona into ehlekisayo kukuba ikwayinxalenye yoqoqosho lwaseMelika urhulumente angakhange aqalise ukungena kulo. Kwinyanga ephelileyo, bekukho umthetho obalulekileyo ovotelweyo kwaye kuyilwa ukuba ujonge ukuwutshintsha… kakhulu.
Ngaphantsi kwesigqi sokuba sidinga imithetho engaphezulu yelungelo lokushicilela kwi-intanethi, i Khusela umthetho we-IP yaphuhliswa kwiNdlu yeeNgwevu nakwi Misa umthetho wePiracy Pirate (SOPA) endlini. Zombini ziyindlela eyoyikisayo kwityala lonyaka ophelileyo le-COICA kwi-Intanethi. Njengowandulelayo, lo mthetho umema ubungozi kwezokhuseleko kwi-Intanethi, usongele intetho ekwi-Intanethi, kwaye uthintele ukuvela kwe-Intanethi.
Funda ngakumbi malunga ne-SOPA kule infographic, inokuba nefuthe elinamandla kwishishini kunye nezinto ezintsha kwi-Intanethi. Kwaye ngaphezu kwako konke - Thatha inyathelo kwaye wazise abameli bakho awuyi kunyamezela:
I-infographic evela Izicatshulwa zeinshurensi yeShishini kwaye ifunyenwe ngumhlobo UJeff Jockisch kuGoogle +!
tags: ukusebenzaisiseko semida ye-elektronikiinkululekointanethistick
I-Pagelines 2.0 iphinda yenze kwakhona i-WordPress Theming kunye ne-Ecommerce